travelitaly Archives | Save A tareenka
by Birta Emma
Waqtiga Akhriska: 5 daqiiqo Yurub waa qaaradda hormoodka ka ah ee firfircoon, lagu noolaan karo, iyo magaalooyin casri ah oo lagu raaxeysto. Waxaa jira waxyaabo badan oo yaabab dhismeedka ah, matxafyada, iyo makhaayadaha waddan kasta oo Yurub ah oo aad ka fekereyso. Nolosha habeenkii iyo muuqaalada cuntada ee qaaradda oo dhan ayaa ka galay kaalinta labaad. Duurjoogta…
Tilmaamaha Safarka Gawaarida, Safarka tareenka, Tareen Travel Czech Republic, Tareenka Safarka Faransiiska, Tareen safarka Giriigga, Tareen Safar Talyaani, safarka Europe, ...
Waqtiga Akhriska: 6 daqiiqo Jardiinooyinka cagaaran, socodka dheer ee buuraha, iyo jawiga raaxada leh waxay kufiican yihiin madaddaalo dibedda. Magaalooyinka ugu quruxda badan Yurub waxay leeyihiin waxkastoo aad isku dayi karto dhamaan howlaha bannaanka ee yurub bixiso. Laga soo bilaabo baaskiil wadista Amsterdam ilaa dul saboolka ah ee Munich, kuwan 7 magaalooyinka ugu fiican…
Waqtiga Akhriska: 7 daqiiqo Safarka iyo ogaashada meelaha cusub waxay ina siisaa baalasho aan ku riyoonno, ku dhiirran, oo wax bartaan. Adduunyada sidan u balaadhan, inta badan macquul ma ahan in wax walba la arko, sidoo kale suurtagal maaha in la arko oo lagu raaxeysto meel kasta oo Yurub ka mid ah. Iyada oo meelo aad u xiiso badan, kaliya waad awoodaa…
Tareenka Safarka ah ee Austria, Tareenka Safarka Belgium, Tareen Travel Czech Republic, Tareenka Safarka Faransiiska, Tareenka Safarka Jarmalka, Tareen Travel Holland, Tareen Safar Talyaani, ...
Waqtiga Akhriska: 5 daqiiqo Ciao! Waad qorsheynta safarka ee Meyeydaan in Italy! Waa ku dhashay ee hormariyo iyo magaalo ballamo in elate oo aad loo Waxyoodo ahayn shuqullada aawadood ay of farshaxanka, naqshadaha, iyo jacaylkeeda cuntada. Talyaanigu waa guriga runta ah…
Safarka tareenka, Tareen Safar Talyaani, safarka Europe
Waqtiga Akhriska: 6 daqiiqo aad wada ogsoon Sida, Venice waa magaalada ugu gaara farxad ee Yurub oo dhan, haddii aanay dunidu. Talyaaniga ayaa waxaa sameeyey oo gebi ahaanba ka mid ah kanaalada iyo aayado yar, kuwaas oo dhammaantood ku seexanaysaa jasiirad. Tani waxay magaalada ka dhigtay mid ka mid ah…
Waqtiga Akhriska: 6 daqiiqo Naples waa ku yaab ah, magaalada Talyaani ka sugayeen. Waxaa lagu buuxiyey hills, dhismayaasha qadiimka ah, iyo yaabab yar iyo cute kale. Waxaa muhiimad ahaan waa magaalada ugu fiican Talyaani ee qof kasta oo raba in ay la kulmaan ruuxa dhab ah Talyaani iyo safarada maalinta ugu wanaagsan ee ka Naples. Si kastaba ha ahaatee,…
Waqtiga Akhriska: 6 daqiiqo Florence waa meel la yaab leh in tiirka iyo waxaa jira in la sameeyo tons. laakiin, haddii aad raadinayso in ay u ganay ka baxsan caasimada this, waxaan ku helay kugu daboolay. Waxaa jira qaar ka mid ah meelaha la yaab leh si ay u booqasho in ay yihiin oo keliya tareenku ka Florence iska. halkan…
5 Best Meelo tagidda Winter In Europe
Waqtiga Akhriska: 5 daqiiqo Europe ayaa soo jiidashada a jiilaalka qaarkood bilaha qabow in qaar ka duwan meesha kasta oo dunida ah. Waxaa jira wax badan oo kala duwan, iyo laba ma aha meelaha leeyihiin dareen isku mid ah iyo jawi. Dhab ahaan, dad badan ayaa sheegaya in magaalooyin iyo tuulooyin inta lagu guda jiro…
Safarka tareenka, Tareenka Safarka ah ee Austria, Tareenka Safarka Faransiiska, Tareenka Safarka ee Hungary, Tareen Safar Talyaani, Tareenka Safarka Switzerland, Tilmaamaha Tareenka Safarka, ...
5 Picturesque Magaalooyinka Si Booqo On Lake Como
Waqtiga Akhriska: 5 daqiiqo Bal qiyaas hoos fadhiya inay ku raaxaystaan ​​kafeega subaxdii aad ku sugnaan naqshadaha dhaqanka Talyaani halka raadinayaa at biyo buluug dhalaalayay oo buuraha cagaaran luscious. Iyada oo ay tani u muuqan yaabaa in sida kaliya riyo, waa xaqiiqo kuwa soo booqda harada Lake Como ee cajiibka ah. Tani waxay lamid ah…
Guide Quick: Sida loo Travel Cinque Terre By tareenka
Waqtiga Akhriska: 6 daqiiqo Italy waa mid ka mid ah meelaha ugu dalxiis loo jecel yahay dunida oo dhan. Dadka soo jabay dalka cunto fantastic, dhaqanka, iyo taariikhda hodanka ah. Dhab ahaan, xitaa uma baahnid in aad si ay u booqdaan magaalooyinka waaweyn si ay u dareemaan qardhaasaha ee Italy. Tusaale wanaagsan…